Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Filipina » Niakatra 52 ny isan'ireo maty tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina Filipina
Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao farany mikasika ny Filipina • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fiaramanidina miaramila dia nitondra mpiasan'ny tafika vao nofanina, nianjera ary nirehitra taorian'ny fanaraha-maso ny lalamby tokony ho tamin'ny 11 ora sy sasany maraina tamin'ny alahady teo.
Roa sisa velona naratra mafy naratra mafy no maty tany amin'ny hopitaly.
Ny asan'ny retrieval ho an'ny sombin'ny fiaramanidina, ao anatin'izany ny boaty mainty izay nandrakitra ny angon-drakitra momba ny sidina, dia mitohy ao amin'ny toerana nitrangan'ny fianjerana.
Ny famotopotorana tanteraka momba ny fianjerana dia nasaina raha vantany vao vita ny asa famonjena sy ny fanarenana.
Nanambara ny sekretera ny fiarovana an'i Filipina Delfin Lorenzana androany fa ny isan'ny maty vokatry ny fianjeran'ny fiaramanidina tany amin'ny faritra atsimon'i Filipina dia nitombo ho 52 satria olona roa hafa kosa dia naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana.
Ireo mpandeha sy ekipa 96 rehetra tao amin'ny fiaramanidina C-130H izay nianjera rehefa nidina alohan'ny alahady antoandro tany amin'ny nosy Jolo any amin'ny faritanin'i Sulu dia nampamoahina avokoa, hoy ny Departemantan'ny Fiarovam-pirenena, ary miaramila 49 no maty ary 47 hafa naratra.
Nilaza i Lorenzana fa sivily telo amin'ny tany no maty ary efatra hafa naratra.
Lorenzana dia efa nandidy ny "famotopotorana feno" momba ny fianjerana "raha vantany vao vita ny asa famonjena sy ny fanarenana."
Ny Jeneraly Jeneraly Edgard Arevalo, mpitondra tenin'ny tafika an'ny Filipina dia nilaza tamin'ny valandresaka nifanaovana tamina mpanao gazety fa ny hetsika fitadiavana ampahany amin'ny fiaramanidina, ao anatin'izany ny boaty mainty izay nandrakitra ny angon-drakitra momba ny sidina, dia mitohy eo amin'ny toerana nitrangan'ny fianjerana, ary nisy ekipa mpanao famotorana tonga tao Sulu.
Minitra vitsy taorian'ny fianjerana dia nirohotra nankany amin'ilay toerana ny miaramila sy ny mpilatsaka an-tsitrapo sivily hitady sy hanavotra. "Isaky ny vavolombelona nahita maso dia nisy miaramila maromaro nitsambikina avy tao anaty fiaramanidina talohan'ny nianjera tamin'ny tany, ary niaro azy ireo tamin'ny fipoahana vokatry ny fianjerana," hoy ny miaramila.
Nilaza i Arevalo fa ny tsy fahatomombanan'ny fiaramanidina C-130H dia iray amin'ireo "tranga mahatsiravina indrindra" nitranga tao amin'ny tafika.